आराम गर्नेका लागि सौराहा पुगेका हुन् देउवा ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
आराम गर्नेका लागि सौराहा पुगेका हुन् देउवा ?
असार १० गते, २०७५ - १३:३९
चितवन। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पर्यटकीय नगरी सौराहामा आराम गरिरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको हेटौँडामा सम्पन्न भेलापछि उनि गत शुक्रबारदेखि सौराहास्थित होटल सेभेन स्टारमाबसिरहेक छन् । उनका निजी सचिव भानु देउवाका अनुसार स्थानीय नेता र कार्यकर्ता कसैसँग पनि उनले भेटघाट गरेका छैनन् ।
जिल्ला सभापति भेलामा पार्टीभित्रकै अन्य समूहबाट पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो । तनावमा रहेका ठानिएका पार्टी सभापति देउवा तनाव कम गर्न एक्लै आराम गरिरहेको बताइएको छ । प्रदेश सांसद मिलनबाबु श्रेष्ठका अनुसार देउवा आराम गर्नकै लागि सौराहामा रहेका हुन् ।
शनिबार काठमाडौँ फर्किने भनिए पनि देउवा फर्किएका छैनन् ।
असार १० गते, २०७५ - १३:३९ मा प्रकाशित